चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई ! यसरी कडा सुरक्षा दिदै – सुदूरखबर डटकम
चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई ! यसरी कडा सुरक्षा दिदै
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुशन्धान विभाग रहने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाईएको छ । सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई उच्चस्तरीय सुरक्षा दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
त्यसका साथै उनको सुरक्षाका लागी चीनवाट समेत सुरक्षाकर्मी आउनेछन् । सरकारले जुनसुकै मुलुकका सरकार प्रमुखहरु आउँदा पनि उच्चस्तरिय सुरक्षा दिंदै आएको छ।
नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा पाएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा सेना परिचालित भइसकेको छ । नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी प्रभुराम शर्माले भ्रमणको सुरक्षाको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनकै नेतृत्वमा तीनै सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेका छन् ।
काठमाडौंमा मात्रै पाँच हजार सेना परिचालित छन् । रिजर्व फोर्स र स्टेण्ड वाई अवस्थामा पनि सुरक्षाकर्मी राखिनेछ् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको सुरक्षा पहिलो घेरमा सेना, दोस्रोमा नेपाल प्रहरी, तेस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र चौथोमा गुप्तचर विभाग रहेन छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी असोज २५ मा नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।